lahatsoratra > toriteny > Ny mombamomba ahy vaovao
Ny fetin'ny Pentekosta izay misy dikany dia mampatsiahy antsika fa ny fiangonana kristiana voalohany dia nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia nanome ny mpino nanomboka teo ary ho antsika olom-baovao marina. Miresaka momba io famantarana vaovao io aho androany.
Manontany tena ny olona sasany: Afaka mandre ny feon'Andriamanitra ve aho, ny feon'i Jesosy, na ny fijoroana ho vavolon'ny Fanahy Masina? Mahita valiny isika ao amin'ny Romana:
«Fa tsy nahazo fanahim-panandevozana mba hatahoranareo indray; fa ianao efa nahazo ny fanahin'ny fahazazako izay itomaniantsika hoe: Aba, ry raiko malala! Ny Fanahin'Andriamanitra dia mijoro ho vavolombelona amin'ny fanahintsika olombelona fa zanak'Andriamanitra isika » (Romana 8,15-16).
Ny maha-izy ahy no mampiavaka ahy
Satria tsy ny olona rehetra no mahalala antsika, ilaina ny fananana kara-panondro marina (ID) hiaraka aminao. Manome antsika fidirana amin'ny olona, ​​firenena ary koa amin'ny vola sy entana. Hitanay ao amin'ny Saha Edena ny mombamomba antsika:
«Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy; lehilahy sy vehivavy no namoronany azy ireo » (Genesisy 1:1,27).
Tahaka an'i Adama noforonin'Andriamanitra, dia nitovy tamin'ny endriny sy miavaka ary tsy manam-paharoa izy. Ny maha izy azy tany am-boalohany dia nampiavaka azy tamin'ny naha zanak'Andriamanitra azy. Koa afaka niteny tamin'Andriamanitra izy hoe: Aba, ry raiko malala!
Saingy fantatsika ny tantaran'ny razambentsika voalohany, Adama sy Eva, izay narahin'izy ireo ny dian'izy ireo. Ilay Adama voalohany, ary aoriany ny olombelona rehetra, dia namoy an'io toetra ara-panahy io tamin'ny alàlan'ilay mpamitaka fetsy, ilay rain'ny lainga, dia i satana. Vokatr'ity halatra maha-izy azy ity dia very ny marika mamaritra azy izay mampiavaka azy ny zanak'olombelona rehetra. Adama, ary isika miaraka aminy, dia namoy ny endrik'Andriamanitra, ny maha-izy azy ara-panahy ary ny very - fiainana.
Noho izany dia hitantsika fa mihatra amintsika koa ny sazy, ny fahafatesana, izay nandidian'Andriamanitra rehefa tsy nankato ny feony isika sy ny taranany. Ny fahotana sy ny vokany, ny fahafatesana, dia nanendaka antsika amin'ny maha-Andriamanitra antsika.
«Ianao koa dia maty tamin'ny alàlan'ny fandikan-dalàna sy ny fahotana, izay nandehananao teo aloha tamin'ny fomban'ity tontolo ity, teo ambanin'ilay mahery izay mitondra amin'ny rivotra, dia ny fanahy, dia i satana, izay miasa ankehitriny. Zanaky ny tsy fankatoavana » (Efesiana 2,1).
Ara-panahy dia nisy fiatraikany lehibe io halatra famantarana io.
"Adama 130 taona i Adama ary niteraka zazalahy toa azy ary mitovy endrika aminy ary nataony hoe Set" (Genesisy 1:5,3).
Set dia noforonina taorian'i Adama rainy, izay nanary ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Na dia efa antitra aza i Adama sy ireo Patriarka dia maty avokoa izy ireo ary ny olona miaraka aminy mandraka androany. Ny fiainana very rehetra sy ny fitoviana amin'Andriamanitra.
Miaina fiainana vaovao araka ny endrik'Andriamanitra
Rehefa mahazo fiainam-baovao amin'ny fanahintsika isika vao averina miaina sy miova ho endrik'Andriamanitra. Raha manao izany isika dia mahazo indray ilay toetra ara-panahy nokendren'Andriamanitra ho antsika.
"Aza mifandainga, satria efa nakanareo ny toetran'ilay anti-dahy tamin'ny zavatra nataony ka nahasarika ny vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana, araka ny endrik'ilay nahary azy" (Kolosiana 3,9: 10).
Satria manara-dia an'i Jesosy isika, ny marina, dia tsy misy fisalasalana fa te handainga isika. Ireo andininy roa ireo dia manamarina fa tamin'ny nanesorantsika ny toetran'ny olombelona taloha dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy isika ary nitafy ny toetra masina tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny Fanahy Masina dia mijoro ho vavolombelona amin'ny fanahintsika fa nohavaozina tahaka ny endrik'i Jesosy isika. Voantso sy voaisy tombo-kase amin'ny Fanahy Masina isika. Amin'ny maha olom-baovao antsika dia efa miaina sahala amin'i Kristy amin'ny fanahintsika olombelona isika ary, tahaka azy, miaina ny fahotan'Andriamanitra. Ny olom-baovao dia havaozina amin'ny fahamarinana ary ny marina dia milaza amintsika hoe iza marina no ao am-pontsika. Zanakalahy sy zanakavavy tian'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy lahimatoa.
Ny fahaterahana indray dia manodina ny fahatakaran'olombelona antsika. Nikodemosy dia efa nieritreritra an'io fahaterahana indray io ary namporisika azy hanontany an'i Jesosy. Ao an-tsaintsika dia mihantona toy ny fanday ary avy eo toy ny cocoon mivadika amin'ny boaty hazo. Miaina ny fomba mahatonga ny hoditra taloha ho lasa tsy mety sy tery loatra isika. Amin'ny maha fanday, saribakoly ary cocoon olombelona antsika dia zavatra toy ny efitrano fanovana voajanahary isika: ao no ovaintsika ho lasa lolo marefo na avy amin'ny natioran'olombelona ho lasa toetra masina, manana ny maha-izy azy Andriamanitra.
Izany indrindra no mitranga amin'ny famonjena antsika amin'ny alalàn'i Jesosy. Fanombohana vaovao io. Ny taloha dia tsy azo apetraka milamina; azo soloina irery ihany. Ny taloha nanjavona tanteraka ary tonga ny vaovao. Teraka indray isika manana ny endrik'Andriamanitra. Fahagagana iainantsika sy ankalazantsika miaraka amin'i Jesosy ity:
"Fa i Kristy no aiko ary ny fahafatesako no tombom-bidiko" (Filipiana 1,21).
Nampiorina an'io hevitra io i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny Korintiana:
«Raha misy olona ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indreo, tonga ny vaovao. " (2 Korintiana 5,1).
Mampahery sy manome fanantenana ity vaovao ity satria tsy manana ahiahy ao amin'i Jesosy intsony isika izao. Ho famintinana ny zava-nitranga dia vakiantsika hoe:
«Fa maty ianao tamin'ny nahafatesan'i Kristy, ary ny tena fiainanao dia miafina ao amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Rehefa ho fantatra amin'izao tontolo izao i Kristy, ny fiainanao, dia ho hitanao koa fa mizara ny voninahiny aminy » (Kolosiana 3,3: 4, New Life Bible).
Miaraka amin'i Kristy isika, raha lazaina, rakotry an'Andriamanitra ary miafina ao aminy.
"Fa na zovy na zovy no mifikitra amin'ny Tompo dia fanahy iray aminy" (1 Korintiana 6,17).
Fifaliana lehibe ny maheno izany teny izany avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Izy ireo dia manome antsika fampaherezana, fampiononana ary fiadanana mitohy izay tsy hitantsika na aiza na aiza. Manambara ny vaovao tsara ireo teny ireo. Mahatonga ny fiainantsika ho sarobidy tokoa satria ny fahamarinana dia mamintina izay maneho ny maha-izy antsika vaovao.
«Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika: Andriamanitra dia fitiavana; ary izay mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy (1 Jaona 4,16).
Mandray fahendrena amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina
Malala-tanana Andriamanitra. Ny toetrany dia mampiseho fa mpanome faly izy ary manome antsika fanomezana be dia be:
“Fa ny fahendren'Andriamanitra dia miafina ao amin'ny zava-miafina izay notendren'Andriamanitra mialoha ho voninahitsika hatrizay; Tonga izany, araka ny voasoratra (Isaia 64,3): Izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina, ary izay tsy niditra tao am-pon'ny olona, ​​izay namboarin'Andriamanitra ho an'ireo tia azy. Fa Andriamanitra kosa nanambara izany tamin'ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny halalin'Andriamanitra » (1 Korintiana 2,7; 9-10).
Tena mampalahelo tokoa raha manandrana manambany ity fahamarinana ity amin'ny fahendren'olombelona isika. Ny zavatra lehibe nataon'i Jesosy ho antsika dia tsy tokony hataontsika tsinontsinona sy fanamavoana amin'ny fanetren-tena tsy azontsika. Anjarantsika ny manaiky am-pankasitrahana sy amin'ny fahatakarana ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'ny fahendren'Andriamanitra ary ampitaina amin'ny hafa izany traikefa izany. Jesosy dia nividy antsika tamin'ny sorona nataony. Noho ny toetra vaovao nomeny antsika ny fahamarinany sy ny fahamasinany manokana, miakanjo toy ny akanjo.
"Izy Andriamanitra dia efa nandahatra ny hahatongavanao ao amin'i Kristy Jesosy, Izay tonga fahendrena ho antsika, misaotra an'Andriamanitra, fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana antsika" (1 Korintiana 1,30 ZB)
Ny teny toa ny: voavotra, nohamarinina ary nohamasinina isika dia azo esorina mora foana amin'ny molontsika. Fa sarotra ho antsika ny fanavotana, hanaiky ny fahamarinana sy ny fahamasinana, araka ny voalaza ao amin'ilay andininy novakiantsika, manokana sy tsy nisalasalana. Ka hoy izahay: Eny, mazava ho azy ao amin'i Kristy, ary midika izany fa fahamarinana na fahamasinana lavitra izany, saingy tsy misy akony mivantana, tsy misy firesahana mivantana ny fiainantsika ankehitriny.
Azafady mba eritrereto ny maha-olo-marina anao rehefa nohamarinina ho anao Jesosy. Ary masina tokoa ianao rehefa tonga fahamasinanao Jesosy. Manana ireo toetra ireo isika satria Jesosy no fiainantsika.
Nohomboana tamin'ny hazo fijaliana isika, nalevina ary natsangana tamin'ny fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy. Izany no antony niantsoan'Andriamanitra antsika ho avotra, marina sy masina. Ampiasainy hilazana ny maha-izy antsika, ny momba antsika io. Mihoatra lavitra noho ny fananana karatra vaovao eo am-pelatananao sy ny maha-anisan'ny fianakavianao izany. Azo takarina ihany koa raha ny saintsika ho iray aminy, satria mitovy aminy isika, ny endriny. Andriamanitra dia mijery antsika araka ny maha-izy antsika, marina sy masina. Averiko indray, Andriamanitra Ray mahita antsika toa an'i Jesosy Zanany, Zanany vavy.
Inona no nolazain'i Jesosy:
Hoy i Jesosy taminao: Izaho efa naka ny fepetra rehetra hiaretanako mandrakariva amin'ny fanjakako. Sitrana amin'ny ratrako ianao. Voavela mandrakizay ianao. Nampidiniko tamin'ny fahasoavako ianao. Ka tsy velona ho an'ny tenanao intsony ianao, fa ho ahy sy ho ahy ho anisan'ny zavaboariko vaovao. Marina, mbola havaozina ianao raha ny tena fahalalana ahy, fa ny lalina indrindra dia tsy afaka ny ho vaovao noho ianao izao. Faly aho fa mampifantoka ny eritreritrao amin'ireo zavatra any ambony ianao, izay nitomboanao sy nifindranao niaraka tamiko.
Noforonina ianao hanehoana ny fiainako masina. Afenina soa aman-tsara ato amiko ny fiainanao vaovao. Nomeko anao ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fiainana sy ny fahatahorana ahy. Miaraka amin'ny hatsaram-panahiko sy fahatsaram-poko no namelako anao hizara ny fitoviana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny nahaterahanao tamiko, dia velona ao aminao ny fiainako. Henoy fa mijoro ho vavolomaso aminao ny fanahiko momba ny tena maha-izy anao.
Misaotra betsaka, Jesosy, noho ny filazantsara henoko. Voavela ny heloko rehetra. Nataonao vaovao ao anaty aho. Nomenao olona vaovao aho miaraka amin'ny fidirana mivantana amin'ny fanjakanao. Nomenao anjara tamin'ny fiainanao aho mba hahafahako miaina ao aminao. Misaotra anao aho fa afaka mifantoka amin'ny marina ny eritreritro. Misaotra anao aho fa miaina amin'ny fomba iray ka lasa miseho miharihary amin'ny alalako ny fanehoana ny fitiavanao. Ianao efa nanome ahy fiainana any an-danitra miaraka amin'ny fanantenana any an-danitra amin'izao fiainana izao. Misaotra betsaka, Jesosy.